Ungangisiza ngamawebhusayithi angcono kakhulu we-backlink kumithombo yezenhlalo?
Yebo, kunamawebhusayithi amaningi wezokuxhumana wezenhlalo kanye namapulatifomu adumile ase-intanethi ngekhasi eliphakeme le-PageRank ne-DA (igunya lesikhulu), okungaba usizo ngempela ezindaweni zokuxhumana. Ngaphambi kokubuyekeza amawebusayithi ahamba phambili kuma-backlink kuma-social media, inothi engezansi ngizobonisa wena kuphela amakhulu - njengoba kungenzeka usujwayele isabelo sezingonyama kula manethiwekhi amanengi. Ngakho-ke, ake sibheke ukuthi ungakha kanjani ukutholakala kwakho kwe-inthanethi nokuthi kufanele uhlwanyela kanjani okuthunyelwe okuyinhloko kokuqukethwe. Eqinisweni, konke okudingayo ukuhlinzeka ngokulingana kwangempela kokuthunyelwe kwakho. Khumbula, kufanele unikeze inani elengeziwe ngokuqukethwe kwakho. Into yukuthi yonke imibhalo yezincwadi zakho ezokuxhumana nabantu kufanele ibe yinto ewusizo futhi ihambisane nezithakazelo zakho ze-niche - como enviar email html pelo gmail. Ngaphandle kwalokho, ngikholelwa ukuthi ukwenza zonke izinto zihlanganyele futhi njengokwamukela ukuxhumanisa ngangokunokwenzeka yindlela kuphela yokusinda nokuhlala emncintiswaneni obanzi kakhulu oshayela indawo yesimanje yezokuxhumana. Kuze kube yilokho, ake sibheke amawebusayithi amahle kakhulu we-backlink ngaphandle lapho.
Le nethiwekhi ethandwa kakhulu cishe phakathi kwamawebusayithi ahamba phambili kuma-backlink kuma-social media. Eqinisweni, i-LinkedIn inezindawo eziningi ezahlukene ezishiya umnyango ovulekile ukudala isixhumanisi sezixhumanisi zenani. Lapha ungakwazi ukwengeza izixhumanisi zephrofayela, kanye nezixhumanisi ezigciniwe ezifushane, futhi okuningiliziwe kusayithi lakho eliyinhloko.
Pinterest ibonisa izinhlangothi zayo eziqine kakhulu uma kuziwa kokuqukethwe okuhlosiwe niche, njenge-DIY. Le platform iphinde ikwazi ukulungisa kabusha okuqukethwe kokuqukethwe kombhalo wakho ocacile kube yinto ethile ebonakalayo futhi ebonakalayo kodwa okwamanje idatha ulwazi, i. e. , ama-infographics, amaspredishithi, njalonjalo. Ukusikisela: Ukusebenzisa i-Pinterest ukwakha izixhumanisi mayelana nesakhiwo sakho sokwakha isixhumanisi esiyinhloko kuzoba nemiphumela ekhulayo, ngakho-ke unganqikazi ukuhlanganisa lokhu namanye amawebusayithi amahle kakhulu we-backlinks.
Ngokuyinhloko le nkundla ngokuvamile ayinakekelwa. Ngakho-ke akukhulunywa ngokungajwayelekile phakathi kwamawebusayithi amahle we-backlink kuma-social media. Futhi into yukuthi i-Instagram ingaba ngempela ibe i-goldmine yangempela - inikezwe ukuthi unemifanekiso emihle kakhulu futhi ihlakaniphile, imibono yokudala yokubuyisela okuqukethwe okubukwayo. Kodwa-ke, phawula ukuthi abathengisi be-digital babulala lapho benza ukuthi kube yinto enzima kakhulu eyinqola yokuncintisana emakethe.
Esikhathini esithile esidlule, ezinye izixhumanisi zephrofayela, kanye nalawo ku-Google +, zingase zibe nesisindo esincane kunezixhumanisi ezijwayelekile ngokuvamile. Yiqiniso, lokhu ukungalingani kususwe ngempumelelo ngokubuyekezwa kwamuva kwe-Panda algorithm. Noma kunjalo, isiteji sezenhlalakahle nge-giant search giant isadingeka ukwehla ezinye izixhumanisi ezibalulekile kunoma yiziphi izimo. Khumbula nje - ukuxhumanisa ne-Google + kuyindlela eqinisekisiwe yokwenza ukufakwa kwe-indexing okusheshayo nokusebenza kahle.
Yilokho! Sifinyelele ekugcineni kule ndlela ehlakaniphile ngempela yokwakha ama-backlinks. Ukucabangela ukuthi ukusebenzisa i-Tumblr yokwenza izixhumanisi ngokuqinisekile kuyinto ekhohlisayo. Noma kunjalo, kudingekile ukuzivivinya ngalesi sithombo esithandwayo kakhulu - uma uthola i-backlink enhle futhi yenza ukuba ijikeleze, ungathola amathuba okuzwakalisa ukuxhumana okungenamkhawulo phakathi nenkathi yeminyaka - ngenxa yezigidi eziningi ze-subdomains ku-Tumblr.